Qoraalkan waxaa markii hore daabacay Manka. Halkan waxaa lagu dhejiyay ogolaansho buuxda.
Faafida COVID-19 waxay gelisay caddaalad-darro aragti aan la dabooli karin, taasoo nagu qasabtay in badan oo naga mid ah inaan weydiinno sida aan wax uga qaban karno kala qaybsanaanta joogtada ah iyo nidaamka taasoo ka dhigeysa in badan oo ka baxsan goobada welwelka aadanaha. Hogaamiyayaasha bulshada ee leh waayo-aragnimada nololeed ee kala duwan ayaa si aamusnaan ah uga hadlaya kala qaybsanaantan, intay sidaas samaynayaan, waxay balaadhinayaan qeexidda lahaanshaha waxayna ballaarinayaan aragtideena cidda aan u aragno inay muhiim tahay.
La kulan Halyeyyada
Sannad kasta, Mu'asasada McKnight iyo Golaha aan faa'iido doonka ahayn ee Minnesota waxay sharfaan afar wakiil oo isbeddel ah kuwaas oo tusaale u ah shaqadan muhiimka ah ee dhisidda bulshooyin xooggan. Abaalmarinta Hero Award ee Virginia McKnight Binger Unsung ee sanadkan waxay ka shaqeeyaan iyo la shaqeeyaan bulshooyinkooda - ka caawinta inay midba midka kale ku xidhmo, xafido kheyraadka, iyo inay sheegaan runtooda.
Boqorka Demetrius Pendelton
Rawxii ayaa yiri
Dhaqanka ugu sarreeya bulshadeenna wuxuu inta badan dhisaa caqabadaha ka mid noqoshada - isagoo ka tagaya aqoonsiyo iyo bulshooyin badan oo bannaanka ah, oo eegaya. Faafida COVID-19 waxay sii xoojisay ifafaalahan caddaalad-darrada ah, laakiin afartan sharaf waxay helayaan siyaabo badan oo ay dad badan ugu sheegaan: "Adiga iska leh." Ruth, Richard, KingDemetrius, iyo Rawhi waxay ku tiirsan yihiin xooggooda si ay u xoojiyaan bulshooyinkooda. Laakin dhammaantood waa ay degdeg u ogaadaan in awooddoodu ay ku jirto wadajirka:
"Mid ka mid ah kuwan xitaa suurtagal ma aha la'aanteed qof walba caawin," ayuu yiri Rawhi.
Iyo xitaa marka caqabadaha qotodheer, sidaas oo kale fursadaha koritaanka. Abaalmarinta sanadkan waxay aaminsan yihiin, sida Ruth tiri, "Qof kastaa wuxuu leeyahay awood uu ku sameeyo isbeddel." Dhammaan waxa ay qaadanayso, sida uu qabo Richard, waa "naxariis, tixgelin, iyo ixtiraam."
Kuwa sharafta leh waxay iftiimiyaan iftiin, iyagoo naga caawinaya inaan aragno runta oo aan helno waddooyin loo maro sinnaan weyn iyo caddaalad - waxayna nagu martiqaadaan dhammaanteen inaan sidaas oo kale sameyno.
"Dhammaanteen waxaan haysanaa iftiin aan ifin," ayuu yiri KingDemetrius, "ma daari doonnaa?"
Ruth Evangelista way taqaan xogta: faa'iidooyinka waxbarashada carruurnimada hore waxay ku sii jiraan ilaa qaangaarnimada. Waxay kaloo garanaysaa muhiimada ay leedahay abuurista helitaan tayo leh oo daryeel caruurnimo hore iyo waxbarasho bulshooyinka aan helin taageero ku filan. Sida aasaasaha La Red Latina de Educación Temprana (Shabakadda Bixiyaha Daryeelka Ilmaha Hore ee Latino), waxay leedahay aragti fudud oo ku saabsan daryeelka carruurta tayada leh: "Caruur faraxsan oo wax bartay."
Marka waalidiintu ay daryeel u raadinayaan carruurtooda, waxay inta badan u jeestaan qoysaskooda ballaaran iyo shabakadaha aan rasmiga ahayn ee lagu kalsoon yahay - awoowayaasha, abtiyaasha, adeerka, asxaabta, iyo deriska. Go'aankan waxaa loo sameeyay sababo badan, oo ay ku jiraan kharashka daryeelka iyo rabitaanka daryeelka in lagu saleeyo dhaqamada qoysaska loo adeegayo. Sannadkii 2013, hooyo carruurteeda daryeesha, oo ay weheliyaan dadka kale ee xaafadda, ayaa u yimid Ruth.
"Waan jeclahay inaan daryeesho carruurta, laakiin waxaan u baahanahay agab - qalab," ayay u sheegtay Ruth. "Waxaan rabaa inaan u sameeyo waxa u wanaagsan carruurta."
Markaa, Ruut waxay bilowday inay la hadasho daryeelayaasha kale. Waxay kala shaqeysay inay aqoonsato baahiyahooda waxayna abuurtay La Red si ay u hesho habab ay iyaga ku dabooli karto. Hoggaanka Ruth, La Red waxay hadda siisaa taageero iyo waxbarasho daryeel bixiyayaasha, oo ay ku jiraan hababka ugu wanaagsan ee nafaqeynta, agabka buuxinta baahiyaha gaarka ah ee carruurta, tababarrada dhaqanka iyo luqadda, iyo hagidda u hoggaansanaanta sharciyada gobolka iyo federaalka.
Ruth waxay aaminsan tahay in qof kasta, oo haysta taageerada saxda ah, uu awood u yeelan karo bixinta xannaano carruureed oo tayo leh, iyada oo aan loo eegin tababarka rasmiga ah.
"Waxaad siin kartaa carruurtaada waxa ugu fiican marka aad haysato agabka lagama maarmaanka ah," ayay tiri.
Ruth waxay ahayd u doode hagar la'aan ah daryeel bixiyayaasha bulshada, iyadoo ka baryaysa dawladda inay u aqoonsato inay yihiin qayb muhiim ah oo ka mid ah shabakadeena carruurnimada hore. U doodisteeda kuma eka halkaas: waxay gacan ka gaysatay joojinta barakaca ballaaran ee in ka badan 1,000 oo ay ugu horreeyaan dadka dakhligoodu yar yahay, soogalootiga iyo kiraystayaasha BIPOC ee Richfield intii lagu jiray masiibada, waxayna ahayd qabanqaabiye awood leh siyaasadaha guryaha la awoodi karo.
Ruth waxay u aragtaa waxaas oo dhan inay yihiin qayb ka mid ah isla shaqada, iyada oo ka wakiil ah La Red iyo bulshadeeda wixii ka baxsan.
"Haddii aad leedahay bulsho caafimaad qabta oo aqoon leh," ayay tiri, "qof kastaa wuu guuleystaa."
Markii Richard Howell xabsiga laga sii daayay 2009, wuxuu u diiday guri ku celcelin. Waxa uu indhihiisa ku arkay siyaabaha suuqyadeena kirada iyo guryeynta ay uga reebaan muwaadiniinta soo laabanaya ee ay saamaysay nidaamka cadaaladda dembiyada. "Sideen ku noqon karaa muwaadin wax soo saar leh haddii aanan haysan baahida aasaasiga ah ee guriyeynta?" ayuu weydiiyey. Waa su'aal degdeg ah oo loogu talagalay gobol leh ku dhawaad 5,000 oo muwaadiniin ah oo soo laabanaya sanad gudihiis.
Halkii uu lumin lahaa rajada, waaya-aragnimadiisa waxay ku dhiirigelisay Richard inuu ka shaqeeyo sidii uu u heli lahaa guryo kiro ah dadka asalkoodu dembiilayaal yahay, isagoo sidoo kale ka caawinaya inay xasiliyaan noloshooda.
"Waxaan rabay in dadku ay helaan hab ay hore ugu socdaan," ayuu yidhi.
Tani waa hal tusaale oo badan oo uu Richard ku arko fursadaha ay kuwa kale dhibaatooyinka ku arkaan. Richard meel walba wuu arkaa fursadaha - isku xirka, isbeddelka, ama nidaamyada cusub ee ka wanaagsan. Waxa uu bilaabay barnaamijyo ka soo kabashada balwadda, guryaynta habaysan oo loogu talagalay dadka dambiyada galay, waxa uu u ururiyay agabka dadka si ay uga badbaadaan COVID-19, oo hadda waxa uu ka shaqeeyaa caawinta dhalinyarada in ay ka gudbaan dugsiga una gudbaan shaqooyin.
Isagoo ka qaybqaatay barnaamijyada soo kabashada balwada, Richard wuu fahmay waxa haysta iyo waxa aan u shaqayn. Waxa uu abuuray xaqiiqooyinka caafimaadka beddelka barnaamijyada tobanka ama laba iyo tobanka tallaabo ee caadiga ah.
Kuwaas "Neefteyda ayaa iga qaaday," ayuu yidhi. "Waxaan u baahday wax neefta i siinaya oo i siinaya dhiirigelin."
Halkii laga diri lahaa fariimo ceebayn kara, xaqiiqooyinka caafimaadku waxay xooga saarayaan muhiimada safarka iyo aqoonsiga bini'aadmiga.
"Waa caadi in la khaldamo mararka qaarkood, waana caadi in qaladaad samayso," Richard ayaa yidhi.
Bilawgii masiibada, Richard waxa uu la kaashaday asxaabtiisa iyo asxaabtiisa, si ay u abuuraan Badbaadinta COVID-19, barnaamij ka soo ururiyay in ka badan $30,000 si uu taageero ugu fidiyo deriskiisa aan guri lahayn.
"Waxaan bixinay cuntooyin kulul, koofiyadaha, kabaha, galoofyada, alaabta nadaafadda shakhsi ahaaneed, kululeeyaha gacmaha," ayuu yiri Richard. "Waxaan la mid ahayn Walgreens socod ah oo ay ku xiran yihiin adeeg cunto!"
Richard wuxuu dhisaa xiriirro si uu uga caawiyo la wadaaga fursadaha uu arko bulshadiisa. Waxa uu shaqadiisa u arkaa in uu meesha ka saarayo caqabadaha u dhexeeya dadka iyo khayraadka, isaga oo abuuraya khadad badan oo toos ah oo fursad lagu heli karo.
"Markii aan u baxo waddooyinka, kuma hadlo dadka," ayuu yidhi. "Waan dhagaystaa iyaga."
KingDemetrius Pendleton had iyo jeer waxa uu leeyahay kamarad isaga.
"Kaamiradeydu waa hubkayga, dookheyga," ayuu yiri. "Markaad runta diiwaangelineyso, runtu uma qalanto raaligelin. Markaad wax aragto, ma dafiri kartid. Markaad runta ogaato, waxaad awoodi doontaa inaad ku dhaqanto.” Sawir qaade iyo saxafi, KingDemetrius wuu fahmay awoodda iyo muhiimada sheekooyinka. Sannadkii 2015-kii markii booliisku ku dileen Jamal Clark ee Waqooyiga Minneapolis, KingDemetrius wuxuu kaamiradiisii la soo baxay goobta. Markii uu marag furay oo uu la hadlayay dadkii kale ee halkaas ku sugnaa, waxa uu arkay faraqa u dhexeeya waxa uu arkayo iyo waxa uu maqlayo iyo waxa warbaahinta caadiga ah ay sawiranayso. Wuxuu dib u xasuustay eraygii Malcom X:
"Saxaafaddu waa hay'adda ugu awoodda badan adduunka. Waxay awood u leeyihiin inay dembiilayaasha ka dhigaan kuwa aan dembi lahayn oo ay dembiilayaasha ka dhigaan mid aan dembi lahayn."
Tan iyo markaas waxa uu sawirayey oo si toos ah u tabinayey dhacdooyin ku soo noqnoqonayey caddaaladda jinsiyadda.
"Waxaan doonayay inaan beddelo habka ay dadku uga sheekeeyaan adduunka," ayuu yiri KingDemetrius.
Waxa kale oo uu si aan daalin lahayn uga shaqayn jiray darawallada khalkhalsan oo sakhraansan dhimashadii gabadhiisa, taasoo uu si xun u dilay darawal naafo ah. Waxa uu la wadaagay ururo badan oo ay hagayeen hadafka, isaga oo siinaya kuwa kale "fursadda, xorriyadda ay ku hadlaan, inay wax ku qabtaan, si ay wax uga qabtaan sababaha caddaaladda."
Isagoo ah aabbe keli ah oo shan carruur ah leh, KingDemetrius hadda wuxuu ururinayaa lacag si uu guri ugu iibsado qoyskiisa. Ammaanka lahaanshaha gurigu waa tallaabo weyn oo u oggolaanaysa inuu sii wato dhaqdhaqaaqiisa bulshada ee iskaa wax u qabso ah iyo sheeko-sheekeysi. Waxay u oggolaan doontaa inuu "ku sii wado ku hadalka awoodda runta, oo uu sii wado muujinta dadka," ayuu yidhi.
Markii Rawhi Said uu jiray laba sano, isaga iyo qoyskiisu waxay Minnesota ku yimaadeen qaxooti ahaan Bosnia oo ay ka yimaadeen. "Gobolkan iyo bulshadan ayaa runtii aniga iyo qoyskaygaba wax badan na siiyay," ayuu yidhi.
"Dad aad u badan ayaa na caawiyay markii ugu horeysay ee aan nimid, waxaan dareemay kaliya inay sax tahay inaan awooday inaan horay u bixiyo."
Sanadkii 2016 Rawhi waxa uu bilaabay in uu u shaqeeyo sidii shaqaale caafimaad oo bulsho oo ka tirsan Ururka Caawinta Dhaqamada Mutual Mutual (IMAA), oo ah hay'ad bixisa caawimada qaxootiga iyo soogalootiga. Laba sano ka dib, IMAA waxay u xilsaartay Rawhi abuurista Kala duwanaanshaha, Sinnaanta, iyo barnaamijka ka mid noqoshada.
Waxay rabeen in ay qaataan aqoontaas ururnimo iyo waayo-aragnimada oo ay abuuraan wax la wadaago " si bulshadan wax u tarto oo la isu baro "
Sannadka 2020, markii masiibadaasi sii korodhay, arday badan ayaa u gudbay waxbarashada khadka, dad badanna waxay bilaabeen inay ka shaqeeyaan guriga. Tani waxay daaha ka qaaday qoto dheer ee kala qaybsanaanta dhijitaalka ah ee bulshada Rawhi. Rawhi waxay ku jawaabtay barnaamijka Nidaamka Qoyska oo dhan, isagoo kala shaqaynaya qoysaska si ay u fahmaan oo ay u maraan baahiyahooda dhijitaalka ah.
Iyada oo la kaashanayo Isbahaysiga Koowaad, mid ka mid ah la-hawlgalayaasha IMAA, iyo xoogaa maalgelin ah oo la soo mariyo gobolka, Rawhi waxa uu awooday in uu siiyo internet bilaash ah in ka badan 140 qoys oo ku nool Degmooyinka Olmsted iyo Winona.
"Haddii ay intaas le'eg tahay baahida ka jirta miyiga Minnesota, ma qiyaasi kartaa gobolka oo dhan?" ayuu weydiiyey. "Waxaan u maleyneynaa helitaanka internetka inuu yahay raaxo," ayuu yiri Rawhi. "Inta badan biyahayga, qashinka, ama korontayda, intarneedku waa adeeg."
Haddi ay noqoto ka caawinta dadka in ay wax ka arkaan waji cusub, ama ka shaqaynta in intarneetka laga dhigo mid qof walba heli karo, u adeegaya sidii Gudomiyeer ee komishanka xuquuqal insaanka ee degmada Olmsted, shaqada Rawhi waxa ay ku wareegsan tahay sinnaanta.
"Fursadda aan ku heli karo garoon lagu cayaaro cadaalad ah oo loo siman yahay - taasi waa meesha hamigeygu ku jiro," ayuu yidhi.